Ski nkpuchi | Igwe mgbanaka magnetik - ULLER
Egwuregwu ndị na-agba skriiki na anya m na-agbanwerịta ibe ha ... Dị mkpa karịa ka i chere!
Omume ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu ugwu anyị maara na anyị ga-adị njikere mgbe niile n'ụzọ kachasị mma. Maka ndị hụrụ njem na egwuregwu dị egwu nke a bụ ihe ha ga-ebute ụzọ n'oge niile, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge anyị nwere ike ịchọta onwe anyị n'ọnọdụ ma ọ bụ na-erughị ala na-achọsi ike n'ebe ahụ, ọ dịkwa mkpa ịkwadebe maka oge ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite.
Otu akụkụ nke anyị ga-ebute ụzọ n'oge niile, nke ahụ bụkwa ihe ndị ọkachamara na-eme, bụ nchedo anya na omume nke egwuregwu egwuregwu oyi maka ihe nkpuchi. Site na Uller® nke a bụ okwu anyị na-eburu n'uche mgbe niile, ebe ọ bụ na radieshon nke ultraviolet nwere ike ịbụ ihe ruru okpukpu asatọ karịa na mkpọda ugwu na ugwu, yabụ na anyị ga-ezere ichebe anya anyị oge niile iji zere nsogbu ka njọ ma ọ bụ pathologies na-arụ ọrụ ogologo oge n'ihi ikpughe.
Ma ọ bụ na ịdị elu n'oge ụfọdụ nwere ike bụrụ onye iro nke anya ma ọ bụrụ na anyị ewereghị ihe ndị dị mkpa iji chebe ha nke ọma, ebe ọ bụ na anyị chọrọ ọhụhụ dị mma oge niile maka omume egwuregwu, okwu dị oke mkpa maka ndị otu anyị na ndị egwuregwu egwuregwu .
Ọ bụ n'ihi nke a na Uller® anyị nwere teknụzụ kachasị elu na ngwa anya n'ụwa ihe nkpuchi. Site na anya elekere X-POLAR nke teknụzụ anyị dị elu, anyị na-enweta nkọwa na nghọta doro anya karịa nke na-enye anyị ohere iche na agba dị egwu.
Onye otu pụrụ iche gwara ndị ọrụ Uller Ul, onye na-ese foto hụrụ ugwu na egwuregwu niile enwere ike ịme na ya, Chechu Arribas, ji aka ya gwa ya. N'ịhuru oke nke ihe okike na-enye, Chechu malitere njem ahụ afọ asatọ gara aga nke ịnwa ịkọwa ihe ọ chere na omume ndị a site na foto.
Maka ya, n'agbanyeghị na iburu kilogram 23 dị na ya bụrịrị ọrụ siri ike, ọnọdụ snow bụ ihe ga-arụrịrịrịrị maka ọdịmma ya, ya mere ọ makwaara nke ọma na ihu igwe bụ ihe a ga-elebara anya. mgbe ị na-eme ugwu ahụ na ịhọrọ mkpuchi nkpuchi nke ahụ ga-eso gị n'oge niile.
Maka Chechu Arribas the nkpuchi snow Ọ bụ ihe etinyere na ngwa ya dị mkpa mgbe ị na-eme ụdị omume niile n'ugwu. Maka ya, onye na-ewere onwe ya dị oke mma mgbe ọ na-ahọrọ ihe ọ ga-eji, ọ dị mkpa na ihe mkpuchi ya anaghị ekpuchi elu na ha na-echebe ya pụọ ​​na anyanwụ, n'otu oge ahụ na-enye ya ọhụhụ ọ chọrọ n'oge ahụ. obere enyemaka na ọhụụ adịghị mma.
Ọ bụ n'ihi nke a maka Chechu Arribas kennyeghari anya m “bụ dara oké ọnụ”. Nchịkọta ọhụụ nke ụdị nkpuchi mkpuchi nkpuchi Uller® gụnyere sistemụ mgbanweta oghere magnet na-enye gị ohere igbanwe anya m ngwa ngwa na oge ọ bụla, dabere na ọnọdụ ihu igwe.
Ebe ọ bụ na onye na-ese foto na onye nwere mmasị na egwuregwu ugwu Chechu Arribas bidoro ile ụdị foto a, o doro anya na ọ ga-esiri ya ike ịrụ ọrụ iji nweta ihe dị mma n'oge ahụ.
Ọ na-agwa anyị onwe ya: Emeela m nnọkọ na 15 dị n'okpuru efu, oge nke ikuku ya ruru 100 km / h, emegoro m igba mgbada na-atụdo 500 mita site na ala, arụọla m ọtụtụ ọrụ na nnapụta foto na mpaghara ebe ọkụ na-adịghị ma na agbanyeghị a otutu apịtị, ofu ụdọ iji nweta agbapụ ọnọdụ ... ”Obi abụọ adịghị ya, trajectory metụtara egwuregwu na ihe nke foto ya na-ebunye anyị mgbe niile.
Ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma bụ otu n'ime ihe na-echegbu ndị mmadụ so na ndị otu Uller®, dịka Chechu Arribas. N'ihi nke a, imeghari ha ekele ka anya m nwere gị ihe nkpuchiọ dị ezigbo mkpa na akụkụ dị oke mkpa nke ndụ ụbọchị niile nke ndị na-etinye oge dị ukwuu n'ugwu.
N'ihi nke a, anyị skai masks nwere arịlịka nke oghere na etiti, ọ bụ nnọọ mfe, inwe ike ịgbanwe anya m dị nnọọ 2 sekọnd. Anya abụọ ahụ gụnyere: 1 maka ụbọchị anwụ na-acha na CAT.3 na nke na-agbanye ọkụ maka ụbọchị ọhụhụ dị ala na CAT.1. N'otu oge ahụ, a na-anabata ihe nzacha anyị niile iji chebe onwe ha pụọ ​​na radieshon ultraviolet, na anya m kwesịrị ekwesị maka nchedo zuru oke nke anya anyị.
Maka ndị mmadụ dịka Chechu Arribas, ya na ndị freeriders na otu ndị egwuregwu egwuregwu, ọnọdụ ihu igwe bụ ihe ha kwesịrị iburu n'uche mana ha ekwesịghị ịda oyi ma ọ bụ belata mgbe ha na-arụ ọrụ ha. Udo nke anya anya ndi ozo na-ezo aka n’inwe ike imeghari dika onodu ubochi nke ubochi ugwu nwere ike inye gi: oyi, okpomoku, ikuku, anwu, mmiri ozuzo ... Ihe di nkpa bu nkasi obi na obi uto nke imeghari na imeghari onodu obula n’enweghi. nwere inwe ọtụtụ ihe nkpuchi n'aka gị.
N'otu oge ahụ, ekele na ntụgharị nke anyị ihe nkpuchi, anyị chọrọ inye ndị na-agba anyị nnukwu arụmọrụ ma n'ụbọchị anwụ na-acha na ụbọchị nwere ọnọdụ ihu igwe dị njọ, ọ ga-abụ igwe ojii, snow, mmiri ozuzo ... UV-400 nchebe. Ọ bụ ya mere na-atụle ihe ndị kasị elu technology anya m na ahịa!
Uller® Ọ bụ akara ngosi dị elu dị elu nke ndị egwuregwu na-eme egwuregwu mebere. A na-emepụta ngwaahịa anyị niile n'okpuru ahụmịhe nke ndị na-eme egwuregwu dị elu bụ ndị na-enweghị mkpa ha na ngwaahịa anyị ma kee ha iji gboo ihe niile achọrọ. A na-anwale ngwaahịa ndị a n'okpuru nrụgide nrụgide kachasị elu iji hụ na ha na-emezu atụmanya n'oge ojiji na omume egwuregwu na nke onye na-amu amu, yabụ na anyị chọrọ ịgba gị ume ịnwale anya m anya gị ọzọ!
Ma ị bụ ọkachamara, onye na-amu amu, ma ọ bụ dị ka Chechu Arribas, nwere mmụọ siri ike n'ihe gbasara foto, anya gị kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa mgbe ị na-echekwa ụdị ọnọdụ niile. Kedu ihe ị na-eche? Lelee atụmatụ ya niile!#FreeRidersAtHearth
O doro anya na anyị niile na-ekwu ya n'olu dara ụda: FUCK 2020! Ezigbo afọ ... anyị ghọtara na ọ bụ n'ezie afọ a, siri ike nghọta, siri ike ịkọwa yana ọ siri ike imeri, ...
Ngwa anya ejiji Onyinye zuru oke inye na Reyes!
Ọ ga-abụrịrị onyinye kacha mma! Igwe ugogbe anya maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dabara adaba ma dozie ọdịdị ihu nke ihu iji nwee ike ịdọ aka ná ntị niile ịdọ aka ná ntị chọrọ
Gwa anyị nke nkpuchi snow ị na-eji na anyị ga-agwa gị onye ị bụ!
Site na Uller® anyị na-ekepụta ihe nkpuchi snow maka ịgba ọsọ na snowboarding site na maka ndị freeriders. Anyị maara na n'ugwu, ụdị mmadụ na ụdị bụ ihe dị oke mkpa maka ndị egwuregwu anyị. Soro
Chọpụta mgbidi ahụ Ọhụrụ ọhụụ anyị nwere ihe mkpuchi maski!
You maraworị nchịkọta ọhụrụ nke ihe nkpuchi skai "Mgbidi"? Echefula ya! Uller® adịghị mgbe ọ bụla n'azụ egwuregwu. Anyị ìgwè ndị na-emepụta na freeride enthusiasts, na
Ngwa anyị kacha ere ahịa na enyo na 2020!
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na afọ a afọ 2020 adịchaghị agbanwe agbanwe, site na Uller® anyị chọrọ ịga n'ihu na-enye ndị nweere anyị ohere na ndị na-eme egwuregwu egwuregwu kachasị mma ka enwere ike inwe ahụmịhe egwuregwu.